“Neymar Jr wuxuu ku guuleysan doonaa abaal-marinta Ballon d ‘Or” – Ander Herrera – Gool FM
(Paris) 23 Sebt 2019. Xiddiga khadka dhexe kooxda Paris St Germain ee Ander Herrera ayaa xaqiijiyay in saaxiibkiis reer Brazil ee Neymar Jr uu ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d ‘Or, kaddib qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa uu soo bandhigay tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka.
Neymar Jr ayaa kaga maqnaa kulamadii Paris Saint-Germain ee loogu diyaar garoobayay xilli ciyaareedka cusub, siyaabo kala duwan awgood, oo ay kujiraan dhaawac, iyo codsigiisii ahaa inuu ka tago kooxda Paris, si uu ugu laabto Barcelona.
Laakiin wuxuu ugu dambeyntii iska sii joogay kooxdiisa ​​PSG, kulankiisii ugu horeeyay ee Isbuucii lasoo dhaafay ay la ciyaareen naadiga Strasbourg wuxuu ka dhaliyay goolka guusha daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta.
Wuxuu markale ku celiyay kulankii ay xalay la ciyaareen Lyon isagoo dhaliyay goolkii ay guusha ku gaartay Paris Saint-Germain daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta, taasoo ka dhigan in 6 dhibcood uu siiyay PSG labadiisii ​​kulan ee ugu horeysay, waxayna arrintan xaqiijineysa wadadii uu ku noqon lahaa xiddiga ugu fiican xilli ciyaareedkan.
Haddaba wargeyska “L’Equipe” ee dalka Faransiiska ayaa laga soo xigtay wareysi uu bixiyay wareyi uu bixiyay xiddiga reer Spain ee Ander Herrera, kaddib ciyaartii xalay wuxuuna yiri:
“Waan ku faraxsanahay inaan ka garab ciyaaro Neymar Jr”.
“Haatan Neymar wuu nala jiraa, waa ciyaaryahan weyn, wuxuuna ku guuleysan abaal-marinta Ballon d ‘Or xilli ciyaareedkan, sannad ama labo sano kaddib”.
“Waan ku faraxsanahay waxa uu Neymar Jr sameynayo, waxaana rajeynayaa in qaab ciyaareedkan uu ku sii ciyaaro xilli ciyaareedkan oo dhan”.